“Isu hubeynta Beelaha waxa ay Liibiya ka dhigeysaa…
Madaxeynaha Aljeeriya Cabdil-majiid Tabuun oo Warbaahinta la hadlay Gelinkii dambe ee Axadda waxa uu markale ka digay Xaaladda Liibiya ku socota iyo faragelinta Shisheeye in laga dhigo Soomaaliyada Cusub.
Waxa uu sheegay in Beelaha (Qabiilada) Dalka Liibiya haatan la hubeynayo si ay dagaal dano gaar ah laga leeyahay u galaan, sidoo kale waa la isku adeegsanayaa si marka ay dagaalamaan looga faaiideysto.
Hogamiye Tabuun ayaa shaaciyay in dagaaladaas saan-saantooda socoto haddii aan laga hortagin ay Liibiya tagi doonto meel hoose oo ay adkaantoodo in la badbaadiyo ama dib loogu soo celiyo waayihii wanaagsanaa.
“Waa in aan istaagnaa Masaafo isku mid ah, dhinaca Liibiya waa in aan taageernaa dib usoo celinta xasiloonida dalkaas, Aljeeriya iyo cid waliba oo nabadda jecel waa u dan degenaanta Liibiya” ayuu yiri Hogamiyaha Aljeeriya.
Waxa uu dul istaagay dhinacyada ugu badan hubeynaya Beelaha ama faragelinaya Dalkaan Carabta iyo Afrikaanimada isku darsaday ee Liibiya, isaga oo iska fogeeyay in xukuumaddiisa ay qayb ka tahay.
“Muhiimadda Xalka Siyaasadeed iyo xiriirka joogtada waa mid ka madax banaan faragelin, Ruushka, Faransiiska, Turkiga, Masar iyo Ururo dano gaar ah ka dhex eeganaya ayaa faraha kula jira, In Beelaha (Qabiilada) la hubeeyo waa halis kale oo weyn, waayo beel waliba waxa ay u dagaalameysaa in dhanka kale ay soo afjarto ama muujiso in ay ka gacansareyso” ayuu sii raaciyay Hogamiye Cabdil-Majiid Tabuun.
Teleefishinka Qaranka Aljeeriya ayaa baahiyay Muuqaal uu Hogamiyaha dalkaas uga hadlayo Xaaladda Liibiya, isaga oo sheegay in xaaladda Soomaaliya soo martay la wada ogyahay, Liibiyana haatan ay ku socoto tubtaas, haddii aysan helin cid ka weecisa (Ka leexisa).
Hogamiyaha ayaa caddeeyay in Dowladdiisa diiday in faragelinta Liibiya “Aljeeriya iyada oo gudaha u geli karto Liibiya gacmaha ayay ka laabatay, dhinacna si gaar ah uma taageerin, waan diidnay in aan qiil u raadinayo guda u gelista, waxa aan jecel nahay in la isku madax banaaneyso oo lagu taageero nabad dhigista, balse aan hub la isugu dhiibin” ayuu yiri.
Waa markii labaad oo Hogamiyaha Aljeeriya Xaaladda Liibiya ugu magac darro Soomaaliyada Cusub, waxaana uu ka digay faragelinta dalalka kala duwan ku sameynayaan in looga daro xaalka sida uu haatan yahay.